Qeybta 1:? Waa maxay file M4V ah
Qeybta 2: Sida loo Play M4V Faylal ay la VLC Media a Player on Windows?
Qeybta 3: Sida loo Play M4V Faylal ay la VLC Media a Player on Mac?
Qeybta 4: Maxaad VLC ma ciyaari karo qaar ka mid ah M4V files?
Qeybta 5: A wanaagsan ee VLC Kaaliyaha
Qaybta 1: Waa maxay file M4V ah?
M4V File waa kordhin file ah, kaasoo loo isticmaalo qaab video ah. File M4V Tan waxaa loo horumariyo by Apple oo ku dhow isku mid ah si ay MP4 File. Si kastaba ha ahaatee, kuwaas oo M4V Files waxaa la siiyey fursada ah inay ilaalinta by isticmaalka ilaalinta nuqul DRM ah. Waa maxay DRM this Copy Protection sameeyo waa looga baahan yahay oggolaansho by Computer ah oo leh account ka, kaas oo loo isticmaalay iibka ah ee kuwa videos ilaaliyo. Sidaas darteed, hab, M4V faylasha, kuwaas oo loo ilaaliyo si buuxda ilaaliyo isticmaalka sharci-darrada ah iyo play qof, kuwaas oo aan la oggolaan.
Kuwani M4V Faylal ay isticmaalaan Apple inay encode files video sida filimada, dhacdooyin TV, iyo videos music, in ay Lugood dukaanka.
The galmo M4V Faylal ay la ciyaari karaan qaab ciyaareed kasta, iyada oo aan oggolaansho looga baahan yahay ee wax ka mid ah nooc kasta. Sidaas darteed, ku Windows iyo MAC labadaba, VLC Media ee Player ciyaari karo M4V Files. The ciyaareed ee aan la ogalayn M4V Faylal ay la VLC ka Player on Windows waxaa la samayn karaa iyada oo loo marayo hanaanka la beddelo ugu kordhin faylasha ka M4V in MP4.
Si kastaba ha ahaatee, si ay u wadaan idman M4V Faylal ay la VLC ah Player on Windows, aad dhab ahaan u baahan tahay faahfaahin login ee account Lugood ah taas oo loo adeegsadey in lagu soo gato file ka. Ka dib xaqiijinta iyada oo xisaabta, faylka si fudud loo ciyaaray karaa Lugood. Haddii aad rabto in aad u ciyaaro dhex VLC, ee looga baahan yahay qaab beddelidda ee file ka M4V in MP4 ayaa loo baahan yahay. Si kastaba ha ahaatee, waxaa jira hab kaliya inuu u ciyaaro faylka Video ilaaliyo kale. Waxaa la samayn karaa iyada oo loo marayo geeddi-socodka ay ka saareen Protection Copyright DRM Lugood dibna beddelo qaabka file ka diinta Lugood DRM m4v in files Cad ah M4V.
Marka, waxaan ka hadli of M4V faylasha, VLC Player iyo Mac, xal durba waa isku mid sida in daaqadaha.
The M4V Faylal ay oggol yahay in la sharciyeeyo saxiixay in ka xisaabta, kaas oo loo isticmaalay iibka ah ee video ah. Kadib markii geedi socodka xaqiijinta, file wuxuu noqon karaa mid si sahal ah lagu ciyaari via Lugood ama VLC Player . Wixii Player VLC ah, file waa in la badaley ka M4V si MP4. Xaaladdan oo kale, aad rabto in aad ka ciyaari faylka la ilaaliyo oo aan la xaqiijin account, xalka sida ku xusan qaybta Windows qabataa wanaagsan, halkan, tusaale ahaan, geeddi-socodka ka saaridda ee Lugood Protection DRM iyo beddelo qaab ka DRM m4v in files Cad ah M4V .
File ayaa galmo la si sahal ah lagu ciyaari karo Mac si la mid ah sida in Windows. Diinta file waxay leedahay in la sameeyo ka Qaabka M4V in ay Qaabka MP4 iyo habka isku raacay in la kara sida in Windows u ordaya Files M4V ku saabsan MAC.
Qeybta 4: Maxaad VLC ma ciyaari karo qaar ka mid ah files M4V?
Waxaa jira sababo badan oo Files M4V laguma ciyaari karo VLC Player. Ka mid ah, copyright ama ilaalinta waa sababta ugu badan ee ugu sareeya isku. Oggolaansho waa in la loo baahan yahay isku mid. Ilaalinta DRM Copyright waa uun sabab kale, taasoo ka hortagaysa in VLC ka Player ka socda faylasha sida. Qaab aan habooneyn, tusaale ahaan qaab File M4V waa sabab kale, oo waxay horjoogsadeen VLC ka Player ka socda faylka si guul leh.
Qeybta 5: A Best VLC Kaaliyaha
Wondershare Video Converter Ultimate waa mid ka mid app cajiib ah sida, taas oo uu leeyahay ururinta weyn talooyin iyo file saarka kordhin oo tirada waa wax ka badan 150. Iyada oo taageero weyn iyo qaababka loo jecel yahay oo ay la socdaan xawaare weyn, Wondershare Video Converter Ultimate waa doorashada ugu fiican ee loogu talagalay dadka ka raadinaya inuu u ciyaaro M4V Faylal ay ku VLC Player.
Tool Tani waxay noqon karaan Converter video ka mid qaab kale ah. Waxaa si sahal ah u bedeli karaan file kasta oo m4v in MP4 iyo sida. Iyadoo Wondershare Video Converter Ultimate ah, warbaahinta VLC Player helo taageero weyn ku socda dhammaan noocyada kala duwan ee files warbaahinta iyo waxay noqon karaan kuwo si fudud u la shaqeeyeen.
Waayo, kanu, waxaad u baahan tahay in aad ku darto file M4V ee loogu tala galay diinta ee interface ee Video Wondershare ka Converter. Eeg si dhekhso ah sida hoos ku qoran.
Ku dar file ah, ka dibna riix on qaabka wax soo saarka la doonayo iyadoo la isticmaalayo dhibic ka hoos menu oo guji menu diinta jooga kooxda gacanta midigta hoose ee interface ka. Ka dib markii file ah waxaa loo baddalaa, waxaad si fudud u ciyaari kara faylka sida oo marka loo baahdo on VLC Player.
Sida loo Remote Xakamee VLC
> Resource > VLC > Sida loo Play M4V Faylal ay la VLC Media Player?